अन्र्तवार्तामा विकासले भने : आफुले झुर बनाउने अनि दोष जति दर्शकलाई दिने ? | News Filmy
सन्दर्भ : नाई नभन्नू ल–३ रिलिज
नाई नभन्नू ल–३ प्रर्दशनका बारेमा केहि भनि दिनुस न् ।
फिल्मलाई हामीले यहि शुक्रबार देखि अल नेपाल सहित अष्ट्रेलियामा एकसाथ प्रर्दशन गर्दैछौ । हामीले सोमवार मात्रै विग मुभिजमा प्रिमियर शो पनि गर्यौ । यसभन्दा अघिका फिल्महरु सिक्वेल जस्तै उक्त प्रिमियर सोबाट फिल्मीकर्मी र पत्रकारहरुको राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौ । त्यसकारण यो भन्दा अघिका फिल्महरु जस्तै यसपटक पनि दर्शकहरुको पूर्ण साथ रहने विश्वास छ हामीलाई ।
नेपाली फिल्मउद्योगमा विकास आचार्य सफल निर्देशकको रुपमा चिनिने नाम हो तर नाइँ न भन्नू ल–३मा आउँदा नयाँ निर्देशक लिनु भयो नि ? जोखिम मोलेको जस्तै लाग्दैन ?
हो, हामीले यो फिल्ममा मुस्कान ढकाललाई निर्देशकको रुपमा लियौ । उहाँले यस अघि म र शिव रेग्मी सँगै रहेर निर्देशनको अनुभव लिनु लिंदा उहाँको निर्देशकिय क्षमता निक्कै राम्रो पाएका थियौ त्यसैले हामीले यो फिल्म उहाँलाई जिम्मा दिएका हौ । र अर्को कुरा प्रिमियरमा फिल्म हेरेपछि उहाँको निर्देशनको तारिफ नगर्ने सायदै कमै देखिनु भयो ।
नाई नभन्नू ल कै सिक्वेलको पछाडि किन लाग्नु भयो ? नयाँ फिल्म बनाउन सकिन्न र ?
नयाँ फिल्म बनाउन नै नसक्ने भन्ने त होइन । नाई न भन्नू लका सिक्वेलहरु नयाँ फिल्महरु जस्तै नै हुन । मेरा अन्य फिल्मलाई दर्शकहरुले मन पराइदिनु भएकै थियो । नाई नभन्नूलाई पनि मन पराइदिनु भएको छ । नाई नभन्नू ल–२लाई अत्यधिक मनपराइदिनु भयो । थुप्रै अवार्डहरु पनि यसले जित्न सफल भयो । हामी सिक्वेलको रुपमा अब ४, ५, ६, बनाउँदै जाने सोचमा छौं । जबसम्म नाई न भन्नू लको सार्थकता दिन सक्छौ तब सम्म सिक्वेलको रुपमा अगाडि जान्छौं ।
तपाई को नजर मा चाहिँ कस्तो बनेको छ नाई न भन्नू ल–३ ?
मैले माथि पनि भने मैले भन्नु भन्दा दर्शक हलसम्म गए पछि थाहा पाइ हाल्नु हुन्छ । हामीले नाई न भन्नू ल––२ भन्दा पनि अझ राम्रो फिल्म बनाउने प्रयास गरेका छौं । प्रिमियर सोमा पनि हामीले त्यस्तै प्रतिक्रिया पायौ जसले हामीलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ । मैले यस फिल्मम गीत पनि लेखेको छु । फिल्ममा रहेको अहिले चर्चामा रहेको गीत यो मन बरु ढुङ्गा भए हुन्थ्यो मैले लेखेको हुँ । साथै यसको स्क्रिप्ट पनि मैले लेखेको छु । सबै टिमले कडा मिहिनेतको फल हो नाई न भन्नू ल–३ ।
फिल्महरु नचलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो फिल्मले राम्रो व्यापार गर्छ भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
गत वर्ष पनि एक सय भन्दा बढीको सङ्यामा फिल्महरु निर्माण भए तर केही औलामा खन्न सकिने फिल्मले मात्र राम्रो व्यापर गरे । खासै फिल्म नचलिरहेको अवस्थामा नाई न भन्नू ल–२ चल्यो । यो वर्ष पनि वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपाली फिल्महरु सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा प्रर्दशन हुँदा केही फिल्मले मात्र आफ्नो लगानी उठाएको देखिन्छ । यो वर्ष पनि दर्शकहरु नाई न भन्नू ल–३ को प्रतिक्षामा छन । राम्रो फिल्म जहिले पनि चल्छन भन्ने उदाहरणको रुपमा नाई न भन्नू ललाई लिन सकिन्छ । नाई न भन्नू ल र नाई न भन्नू ल २को भन्दा अझ राम्रो व्यापार गर्नेमा दर्शकहरुले मन पराउनेमा हामी आशावादी छौं ।
तपाईंको फिल्म हेर्न दर्शक हलसम्म जाने आधार के के छन् ?
सबैभन्दा ठूलो आधार फिल्म राम्रो बनेको छ । नाई न भन्नू ल आफैँमा एउटा ब्रान्ड भइसक्यो अब । यो भन्दा अघिका फिल्म ले उत्साहजनक सफलता प्राप्त गरेका कारणले यो फिल्म कस्तो बनेको छ ? कहिले प्रर्दशनमा आउला भन्ने प्रतिक्षामा छन् दर्शकहरु । अरु यसको गीत सङ्गीत उत्कृष्ट रहेको छ । जुन फिल्म प्रर्दशनमा आउनुभन्दा अघि नै निक्कै चर्चामा रहेका छन् । युटुवलगायत सामाजिक सञ्जाल र एफ एम टेलिभिजनहरुमा यसका गीत सङ्गीतको चर्चा भएको हामीले पाएका छौ । त्यस्तै कम ब्याक गरेकी सञ्चिता लुइटेल, सुरजसिंह ठकुरी, आर्यन सिग्देल, प्रियंका कार्की लगायतका कलाकारहरुको उत्कृष्ट अभिनय पनि यो फिल्म हेर्ने आधार हो । खासगरी अनुभव रेग्मी जसले गत वर्षका अवार्डहरुमा सफलता प्राप्त गरे । चलचित्रमा रहेका अन्य कलाकारहरुको पनि उत्कृष्ट अभिनय यो फिल्म हेर्ने आधारहरु हुन । यो फिल्म हेर्ने यही आधार भन्दा पनि आधारहरुको प्याकेज नै छ यो फिल्म मा भन्नु पर्ला कि कसो ?
नेपाली फिल्म चलाउन नै गाह्रो छ ? चल्दैनन्, लगानी उठाउनै धौ धौ छ भन्नेलाई के भन्नु हुन्छ ?
आफ्नो समान कस्तो छ भन्ने कुरा हो । बजारमा रहेको राम्रो सामानमा सबैको आँखा गएकै हुन्छ । आफुले राम्रो बनाउन सक्नु पर्यो लगानी किन उठदैन ? लगानी उठने मात्र होइन राम्रो व्यवसाय पनि हुन्छ तर दर्शकको मन जित्न सक्नु पर्यो त्यसै अनुसारको आफ्नो उत्पादन हुनु पर्यो। आफुले झुर बनाउने अनि दोष जति दर्शकलाई दिने यो फिल्मकर्मीहरुको नै मुख्य समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ । राम्रो फिल्मले लगानी उठाउने मात्र होइन यस क्षेत्रको श्रृविद्धिमा नै सहयोगपुर्याउँछ ।
अहिले चलिरहेको नेपाली फिल्मको बर्गिकरणको बहसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
हो हाम्रा जस्ता पाए त्यस्तै फिल्मलाई एउटै टोकरीमा राखिन्छ । यसको बर्गिकरण हुन वर्तमानको आवश्यकता हो । फिल्मको मात्र होइन हलहरुको बर्गिकरण हुनु जरुरी छ यसले हलवालाहरुका साथै निर्माताहरु सबैलाई फाइदा पुग्छ ।
हाम्रा फिल्महरु चाहिँ कहिले पुग्लान अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा ?
हामी हरेक कुरामा सक्षम हुन आवश्यक छ । प्राविधिक देखि लिएर सम्पूर्णकुराहरु यसका लागि आवश्यक पर्छ । खासगरी हाम्रो अभिनयको उचाइ नै अहिले त्यो अवस्थामा छैन । जुन विषय वस्तुमा फिल्म चाहिने हामीले त्यो स्तरमा चलचित्र दिन सकेका छैनौ अन्तर्राष्टिय स्तरका लागि ।
हाम्रा विगतका फिल्महरुलाई जस्तै यो फिल्म नाइँ न भन्नू ल–३लाई पनि दर्शकहरुले माया गरिदिनुहुने छ भने आशा लिदै हामीलाई माया गर्ने सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
साभार : गीता अधिकारी (फिल्मीखबर साप्ताहिक )